अफगानिस्तानमा कारबम बिस्फोट हुँदा आठ जनाको मृत्यु - नेपालबहस
अफगानिस्तानमा कारबम बिस्फोट हुँदा आठ जनाको मृत्यु
| १८:२३:०७ मा प्रकाशित
२९ फागुन, हेरात । पश्चिम अफगानिस्तानमा शुक्रबार भएको एक शक्तिशाली कारबम बिस्फोटमा परेर कम्तीमा आठ जनाको मृत्यु भएको छ भने अरु दर्जनौं व्यक्ति घाइते भएका छन् । सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी आक्रमण भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निन्दा एवं खेद व्यक्त गरेकै समय पछिल्लो आक्रमण भएको छ ।
हेरातस्थित प्रहरी मुख्यालयलाई लक्षित गरी कारबम बिस्फोट गराइएको प्रहरीले जनाएको छ । हेरातका प्रान्तीय गभर्नरका प्रवक्ता जेलानी फरहादका अनुसार बम बिस्फोटबाट दर्जनौं घर र पसलहरु नराम्रोसँग क्षतिग्रस्त भएका छन् । मृत्यु हुनेहरुमा महिला, बालबालिका र सुरक्षाकर्मी रहेको प्रवक्ता फरहादले बताए । उनले बम बिस्फोटबाट ४७ जना घाइते भएका र उनीहरुको हेरातका अस्पतालहरुमा उपचार भइरहेको जानकारी दिए ।
अफगानिस्तानको मुख्य विद्रोही समूह तालिबानका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले हेरातमा भएको बिस्फोटसँग आफ्नो समूहको कुनै सम्बन्ध नरहेको दाबी गरे । तर, तालिबानका लडाकूहरु यस राज्यमा निकै सक्रिय छन् र हालैका दिनहरुमा उनीहरुले सुरक्षाफौजलाई लक्षित गरी धेरैवटा हमला गरिसकेका छन् ।
राष्ट्रपति अश्रफ घानीले हेरात बिस्फोटका लागि तालिबान दोषी रहेको बताए । राष्ट्रपति घानीले एक वक्तव्य प्रकाशन गरी तालिबान समूहले आफ्नै जनतामाथिको अवैधानिक युद्धलाई निरन्तरता दिइरहेको र उनीहरुले वर्तमान सङ्कटको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि पहल नगरेको उल्लेख गरे ।
गत शुक्रबार, राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदले अफगानिस्तानमा नागरिक–लक्षित आक्रमणलाई लिएर कडा शब्दमा निन्दा एवं भत्र्सना गरेको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले तालिबान र अमेरिकाबीच भएको सम्झौताको समीक्षा गरिरहेको बताउँदै आएका छन् ।
अफगानिस्तानमा २४ घण्टामा ५९ जना मारिए २ हप्ता पहिले
अफगानिस्तानको घाटा बजेट पूर्ति गर्न मुद्राकोषबाट ४६ प्रतिशत ऋण १ महिना पहिले
आगामी आवदेखि नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक बिस्तार गर्ने तयारी भर्खरै
विमानस्थलबाट स्रोत नखुलेको २४ लाखसहित एकजना पक्राउ २३ मिनेट पहिले
२१ औं समूहको ट्राफिक प्रशासन तालिम सम्पन्न २६ मिनेट पहिले
जसपा कार्यकर्ता रिहा गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय २९ मिनेट पहिले
सरकारले अलोकतान्त्रिक चरित्र देखायाे : नेता सिंह ३९ मिनेट पहिले
रात्रीकालिन व्यवसायमा रोक लगाउने मन्त्रिपरिषदकाे निर्णय २ घण्टा पहिले
आज कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै ४ घण्टा पहिले
विरेन्द्र नौभाग्यको तिम्रो मनमा २३ घण्टा पहिले
रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न सरकारी कार्यदल गठन ३ हप्ता पहिले
‘कोभिड–१९’ बाट विश्वमा आठ लाख ६० हजार ९ सय २७ सङक्रमित १ वर्ष पहिले
मर्निङ वाक हिँडेका एक पुरूष मृत अवस्थामा फेला ५ महिना पहिले
NRN मेरिल्याण्ड निर्वाचनका लागी देशार समुहको उम्मेदारी सार्वजनिक ! २ वर्ष पहिले
बस टिकट काउन्टरमा कार्यरत कर्मचारीलाई अबदेखि अनिवार्य पोशाक ! २ वर्ष पहिले